Xaaladda Muqdisho Oo Saaka degan • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Xaaladda Muqdisho Oo Saaka degan
Xaaladda Muqdisho Oo Saaka degan
Xaaladda magaaladda Muqdisho ayaa u muuqata saaka mid degan kadib markii mudo lix maalmood ay ka soconayeen dagaalo xoogan oo u dhaxeeya Ciidamada Dawladda Federaalka oo gacan ka helaaya kuwa AMISOM iyo xoogaga mucaaradka ee kasoo horjeeda.
Xirriro kala duwan aan la samaynay goobihi lagu dagaalamay ayaa lagu soo waramaaya in labada dhinac aysan jirin wax dagaal u dhaxeeya balse ay ishor fadhiyaan isla markaasna ay socdaan dhaq dhaqaaqyo ciidan.
Wararka ayaa intaas ku daraaya in xaafadaha lagu dagaalamay ee Hodan,Howlwadaag iyo Boondheere saaka ay aad u deganyihin,balse mararka qaar la maqlaayo rasaas goos goos ah.
Dhinacyada ku dagaalamay halkaas ayaa kala sheegtay guulo,waxaana aan jirin ilaa iyo hadda natiijo rasmi ah oo kasoo baxay dagaaladaas marka laga soo reebo khasaaraha badna ee soo gaartay dadka rayidka ah.
Ku dhowaan 200-qof ayaa ku geeriyooday dagaaladii ka dhacay Muqdisho lixdii maalmood ee lasoo dhaafay,waxaana dhaawaca yahay mid intaas ka badan.
Dagaalka ayaa la filan kara inuu dib u qarxo,waxaana heegan aad u sareeya laga dareemaya labada dhinacba.
Xarakadda Al-Shabaab ayaa isniinti hore ku dhawaaqday dagaal kama dambeys ah oo ka dhan Dawladda Federaalka iyo Ciidanka AMISOM.